Ipolitiki yamaqembu: UKhuzeni uyinqume amanqindi yayizinqindi - Bayede News
Abanye beqembu nabahlaziyi bakubuka njengesinqumo esingaphusile ukususwa kukaMaDube
Kungakapheli zinyanga zingaki ElaboHlanga libike ngokuzazelana phakathi kwabaholi bakaHulumeni waKwaZulu-Natal, isigameko saleli sonto senze kwamukeleka kwabanye ukuthi isidubule intabamlilo ekade ibikezelwa. Lokhu kulandela isinqumo sikaNdunankulu waKwaZulu-Natal, uMhlonishwa uSihle Zikalala, sokususa uMhlonishwa uMaDube Ncube emnyangweni obukwa ngabaningi njengomqoka ekulungiseni ipolitiki yezomnotho kulesi sifundazwe lapho aboHlanga besilele khona. Kwabakhulume naleli phephandaba ngaphakathi eqenjini i-African National Congress (ANC) nakuHulumeni lokhu “akwenzi mqondo”.
Ngesikhathi elaboHlanga likhuluma namalungu eqembu emasontweni edlule nayilapho lolu daba belumunyungwa khona, akuvezile ukuthi ibe khona imizamo yokuphebeza lokhu.
“Ibixoxwa le ndaba ezinhlakeni, kwakhona ukuzama ukuthi kungabi njengoba sekumenyezelwe kepha obekusobala wukuthi uZikalala ubejahile ukuthi kwenzeke. Kodwa akwenzi mqondo, yebo uRavi yilungu likaKhongolose kepha umnyango afakwa kuwo ngasohlangothi lwezomnotho usebenza kakhulu izindaba ezithinta aboHlanga njengoba njengeqembu sisemkhankasweni wokubathuthukisa ngakwezomnotho. URavi uzoya eNanda ayokhuluma neNjeje? Uzoya eChesterville noma KwaMashu ayokhuluma namalungu ethu oMkhonto afuna amathuba emisebenzi?” kubuza lo mholi.
Omunye uthe:“Cha bafowethu iqiniso alikho. UComrade uNomusa ubegijima sesimuzwa bese esuswa kanje? Kusobala uKhuzeni akathandi umuntu ogijima njengaye noma ogijima amedlule. Ufaka umuntu aziyo ukuthi ngeke athi vu kwenzinye izinto. Wena ungathengisa isifundazwe esinabantu abaningi boHlanga ngomlungu noma ngeNdiya. Cha akwenzi mqondo kodwa singamaguerilla siyabona kwenzakalani sekuqala khona ukududulwana, asikhohlwe yiRadical Economic Transformation.” kusho lo mthombo oyilungu eliqavile loMkhonto Wesizwe. Omunye ophawule ngalokhu nguMnu uMfanafuthi Ngwabe ongumholi kaVukayibambe eLower South Coast Region uthe kwezokuxhumana: “Eqinisweni lilonke lokhu kukaRavi Pillay noKuthuthuukiswa Komnotho, Ezokuvakasha Nezemvelo ihlazo. Nakuba ephuma esifundeni sami kodwa nginombono oqinilie wokuthi bekungenasidingo. Bekufanele ahlaliswe ekhaya unomphela. Lokhu yisiphelo soMnyango obubonakala wenza kahle ngaphansi kukaZikalala noNomusa MaDube Ncube besengabaphatiswa bawo,” kubhala uNgwabe.
Bonke abakhulume nelaboHlanga bamile ekutheni uMaDube Ncube uyiswa eMnyangweni ozomenza angabonwa ngabantu. Futhi basho khona ukuthi lokhu kungenxa yabathile abahlelela izikhathi ezizayo zokhetho lwangaphakathi.
Embikweni owedlule elaboHlanga ezikhathini ezahlukene imithombo emibili ehlala eSigungwini Sesifundazwe esiholwa nguNdunankulu kanye nowodwa ohlala ebuholini besifundazwe beqembu, ithe yize kulokhu uthuli luvele ngemisebenzi evezwa wukhuvethe, umsusa wodaba yisikhundla sobundunankulu. Ukungahoshelani kuthiwa sekuhlala obala njengoba kweminye imihlangano kuthiwa kuze kuphakame namazwi kucije nolimi. Komunye nje kuthiwa uze waba nyembezana uMaDube kwaze kwangenelela abanye abaphathiswa nakhona okuvela ukuthi nabo behlukene phakathi njengoba kukhona abeseka uZikalala nalabo abazwelana noMaDube abakholwa ukuthi uyahlukunyezwa.
UMntwana uyisebenzele i-IFP ayimphumuze manje
Umhlaziyi wepolitiki, uMnu uThabani Khumalo, uthe kunuka santungwana.
“Umuntu ofana noNomusa Dube nofuna amandla ezombusazwe, kuyaziwa ukuthi uma usumfaka eMnyangweni Wezezimali uyomnqinda amandla ukuthi ahlale ehhovisi abambe izincingo kuphela. Empeleni uzofana noTito Mboweni osegcina ngokugqama ezinkundleni zokuxhumana ngoba kulo Mnyango akukho okukwenza uye kubantu. UZikalala ubonile ukuthi uma efaka uNomusa Dube kulo Mnyango usemvala umlomo okokugcina ngoba uyabuboma ubungozi bakhe nokuthi ungusopolitiki okuthandayo ukuhlala esebantwini ngakho ukumfaka lapha kuzomenza anyamalale emehlweni omphakathi. Futhi badlala ngaye ngoba uPillay usevese uwenzile umsebenzi wokwaba izimali zonyaka ozayo usenze umsebenzi ongama-95% kuyimanje,” kusho uKhumalo.
Echaza izizathu zokwenza izinguquko uKhuzeni uthe: “Laba baphathiswa ababili sebemnkantshubomvu abanesipiliyoni esinothile kuHulumeni. Sibalindele ukuthi bahlale phezu komsebenzi futhi baqinisekise ukuthi sisheshisa izinga ekuhlinzekeni izinto eziyisishoyagalombili eziseqhulwini zalo Hulumeni futhi kwenziwe ngcono impilo yabantu besifundazwe sethu. Lolu guquko luzovuselela kabusha futhi lulethe amaqhinga azobeka uHulumeni esimweni sokuphuthumisa uguquko. Iqhaza labo lizobaluleka njengoba siphendula enkingeni yomnotho esibhekene nayo edalwe ukhuvethe,” kusho uZikalala.